Ministriin dhimma alaa US Mike Pompeo wal ga’ii prezidaant Doonaald Traampii fi hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un waliin karoorfame irratti mari’achuuf kan New York dhufaa jiran angawaa kooriyaa kaabaa waliin har’a gara boodaa wal argu.
Itti aanaa dura taa’aan Kooriyaa kaabaa Kim Young Chol gara NY dhufaa jiraachuu Traamp ergaa Twitter maxxansaaniin beeksisaniiru.
Sa’aatilee hanga tokko dura Kim Yong Chol itti aanaa dura taa’aan paartii biyya bulchu kan Kooriyaa Kaabaa fi hoogganaan basaasa waraana duraanii gara US-tti qajeeluuf ennaa jedhan viidiyoo dhaan argamee jira.
Dubbi himtuun White House Sarah Hucabee Sanders akka jedhanitti Traamp Waxabajjii 7 muummicha ministeeraa Jaappan Shinzo Abe waliin wal arguuf jiru, US gumii Traampii fi Kim gidduutti geggeessamuuf qophaa’aa jirti.
Angawaan White House gameessi Joe Hagin fi kanneen biroon bulchiinsa Traamp keessaa dilbata dheengaddaa gara bakka gumiin sun itti karoorfamee ture Singaporetti imalanii jiran.
Qoophee loojistikaaf jecha gara Singaporitti imaluu isaanii angawaan White House tokko VOAf kaleessa mirkaneessaniiru.